China Wholesale ambongadiny bisikileta an-tendrombohitra / vidin'ny vidin'ny factory bisikileta tendrombohitra midina ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy | Beimudou
Bisikileta ambongadiny / santimetatra ambongadiny vidin'ny bisikileta tendrombohitra milanja 26 inch ho an'ny lehilahy
Bisikileta Mountain General (Hardtail Mountain Bike)
Ny endrika manandanja indrindra amin'ny bisikileta an-tendrombohitra dia ny mpitroka hatavezana eo anoloana sy ny kalitao avo lenta vita amin'ny vy, aliminioma na fibre karbonika
filanjana Steel Mtb Design
Fork Fiatoana vy, Cage vy
H / Bar Steel 22.2 * 31.8Mm, Swallow Bar, 580Mm
H / taho Alika mihozongozona ,, A-Head, Ext: 90Mm
Chainwheel Steel 42 * 36 * 26T * 165Mm.Cotterless
Pedal PP Body W / Ball, Cage vy
sisiny Opc .Cnc
Tyro sy Tue 1.95 ″, Butyle, A / V
Fitaovana Shimano 21Speed, Index
Shifter Rapidfire- Shifter
notapahiny Samy Disc -Brake Amd Alloy Lever
seza Mtb Type W / Rail
Paositra seza 25.4 * 320Mm, W / O Clamp
Volana samihafa amin'ny bisikileta:
Bisikileta Mountain General (Bisikileta Mountain Hardtail)
Bisikileta feno tendrombohitra (bisikileta an-tendrombohitra lava rambo)
Ny tanjon'ny fametrahana ny rafitra mpitroka tampoka amin'ny bisikileta an-tendrombohitra dia ny fiatrehana ny fiantraikan'ny hazakazaka midina.
Ny bisikileta feno tendrombohitra feno fitrohana farany dia natao araka ny fepetra matanjaka sy mahazo aina, ny mitaingina fiara mandritra ny andro dia tsy hahatsiaro ho reraka be loatra, noho izany ny bisikileta feno gunung izay manaitra dia ilay bisikileta an-tendrombohitra ahazoana aina indrindra.
Bisikileta tendrombohitra misy tanjona maro
Maro ny tanjona amin'ny bisikileta Mountain Bike Mountain Bike dia natao ho an'ny olona izay tia bisikileta an-tendrombohitra ary te-handeha eo anelanelan'ny tanàna sy ny arabe an-tendrombohitra.
Ahoana ny fomba hisafidianana bisikileta an-tendrombohitra?
Ny hamafin'ny mitaingina:
Araka ny sokajy bisikileta an-tendrombohitra dia azo zaraina ho sokajy roa izy io: fanatanjahan-tena sy fanatanjahantena fialamboly. Ny lalan'ny teo aloha dia ny lalana asfalta sy ny lalana fasika sarotra. Mandritra izany fotoana izany dia afaka mankafy ny toerana kanto eny an-dalana isika mba hahatratrarana ny tanjon'ny fanaovana fanatanjahan-tena sy ny fanatanjahan-tena.
Ny làlana farany dia misy tsiro kokoa, ny hamafin'ny mitaingina sy ny haavony dia manana ambaratonga iray.
Refy sy kojakoja:
Na inona na inona karazana mitaingina nofidinao dia tsy maintsy misafidy ny haben'ny endriny marina ianao ary manitsy ny fihetsika FITTING tsara. Raha tsy izany, na dia misafidy ny maodely ambony sy ny faritra aza ianao dia tsy mifanaraka amin'ny filanao mitaingina ary misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny vatanao aza.
Manoloana izany indrindra dia asaina ny elanelana misy eo anelanelan'ny zana-kazo sy ny lakandrano ambony dia tokony ho ambony noho ny rantsan-tànana roa, izay fanjakana mety.
Teo aloha: Bisikileta fandanjana mpamokatra OEM / ODM miaraka amina harona - bisikileta feno ankizy amidy mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 taona / 2019 fivarotana mafana - Beimudou
Manaraka: Bisikileta MTB 26 inch / bisikileta an-tendrombohitra avo vy
Bisikileta Mountain Hardtail
Bisikileta mandanjalanja, Bisikileta, Bisikileta mandanjalanja, Bisikileta fandanjalanjana mavokely, Bisikileta / bisikileta 20 santimetatra, Bisikileta fandanjana ankizy,